Iindaba - Wazi ntoni nge-Mineral Fiber Board?
Ibhodi yoboya yamaminerali iya kufakwa kwiipatheni ezahlukeneyo ngexesha lokuvelisa, ezilungele ukusetyenziswa kwiindawo ezahlukeneyo. Umphezulu oqhelekileyo webhodi yoboya bamaminerali unemingxunya yemingxunya, imingxunya emikhulu kunye emincinci, iipinileles ezixineneyo, ukugqabhuka kwesanti kunye nonyango lwefilimu. Kananjalo sinokwenza imilo yobugcisa engaphezulu emgangathweni, njengebhanti yomqala wevenkile yokutsala, ibhodi yokuhlola, ibhodi echithekileyo, njl. Njl. Ibhodi ethwala isandi ayinazinto ziyingozi emzimbeni womntu, kwaye ukwakhiwa kwayo okubonakalayo kunokubamba iigesi eziyingozi emzimbeni umoya kwaye ukhulule iimolekyuli zamanzi, ngoko unokucoca umoya kwaye uhlengahlengise umoya wangaphakathi ngaphakathi.
Amandla okubonakalisa amandla uboya bamaminerali bunokuphucula ngokufanelekileyo ukukhanya kwangaphakathi, ukugcina ukujonga kwamehlo kunye nokuphelisa ukukhathala. Ukujonga okuphezulu kunganciphisa ngokungathanga ngqo iindleko zokusetyenziswa kwamandla, ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-18% uboya obucocekileyo bokufudumeza okufudumeleyo, ukusebenza kwe-insulation kungonyusa ukunciphisa kweendleko zokupholisa kunye nokufudumeza, ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-30% iindleko. Eyona nto ingafunekiyo yebhodi yokucoca iswekile ye-mineral i-fiber kunye ne-fiber eyimbumbulu ye-mineral, enobunzima phakathi kwe-200- 300Kg / m3, ngoko inobutyebi ngokusebenzisa micropores, enokuthatha ngokufanelekileyo amaza esandi kwaye inciphise ukubonakaliswa kwesandi sombane, ngaloo ndlela ukuphucula umgangatho wesandi ngaphakathi kunye nokunciphisa ingxolo.
Ukulungiselela ukufaka ibhodi yoboya yamaminerali, iindlela ezahlukileyo kufuneka zenziwe kwiimbombo zebhodi ukuhambelana nenkqubo yokupheliswa kwephahla. Ke ngoko, imiphetho inokuba ngumda osikwere, umda ophathekayo, umda we-beve, umda ofihliweyo okanye umda wenqanawa.
Ubungqingqwa kwakhona bunokuba yi-14mm ukuya kwi-20mm ngokweemfuno ezahlukeneyo. Ukuchazwa ngokubanzi zi 595x595mm, 600 × 600mm, 603x603mm, 605x605mm, 625x625mm, 595x1195mm, 600 × 1200mm, 603x1212mm, njl.
Ngexesha lokwakhiwa kwebhodi yoboya bamaminerali, igumbi kufuneka livaliwe ukunqanda ukungena komoya oshushu ukuze oko kubangela ukuba ibhodi enoboya bemaminerali isinking;
Ngexesha lenkqubo yokufaka, abasebenzi kufuneka banxibe iigloves ezicocekileyo ukugcina umphandle webhodi ucocekile.
Ibhodi yoboya yamaminerali inemisebenzi emihle efana nokufunxwa kwesandi, ukungadibani, ukufakwa kobushushu, umhombiso olungileyo, njl njl.jl. Ngoku kusetyenziswa ngokubanzi kwezakhiwo ezahlukeneyo zodonga kunye nodonga olungaphakathi lodonga; ezinje ngehotele, iivenkile zokutyela, iithiyetha, iivenkile zokuthenga, iindawo zeofisi, i studio, ii studio, amagumbi ekhompyutha kunye nezakhiwo zemizi mveliso.